Kushubile embhikishweni wabasemapulazini | isiZulu
Kushubile embhikishweni wabasemapulazini
De Doorns - Amaphoyisa avulele ngezinhlamvu zenjoloba ezama ukuhlakaza amakhulu abasebenzi basemapulazini abhikishela ukuthola amaholo angcono, osukwini lesibili lombhikisho onodlame kulendawo ejwayele ukuba nokuthula eWinelands.
Amaphoyisa nabasebenzi balwelwa ngasemgwaqeni omkhulu u-N1, nokudala isiminyaminya nokuvalwa kwamadolobha amancane kulendawo.
Ababhikishi ngaseDe Doorns bashise umlilo baphosa amatshe bebhekise ezimotweni zamaphoyisa, okuphoqe amaphoyisa abedlubhe ezawo ziphelele ukuba aphendule ngezinhlamvu zenjoloba kanye nosi olukhalisa unyembezi.
Isixuku sihlakazekile kodwa saphinde sahlangana futhi, ungaze ufunge ukuthi kudlalwa umacashelana kulendawo enkulukazi ekukhiqizeni iwayini e-Afrika.
Abasebenzi basemapulazini ngoLwesithathu baqale phansi isiteleka eWestern Cape befuna kubuyekezwe amaholo abawatholayo.
Izinkulungwane zabasebenzi ezibeke phansi amathuluzi ngemuva kwezingxoxo ezingabanga yimpumelelo kulandela ukuma kokusebenza kwangenyanga edlule okwadlula nemiphefumulo yababili.
Abasebenzi bafuna ukukhushulelwa amaholo asuke ku-R69 aye ku-R150 ngelanga.